အစ်ကိုဖြစ်သူနဲ့ ယောက်မက လိုတဲ့ပိုက်ဆံလေးစိုက်ပြီး ကားအသစ်လေးတစ်စီး ဝယ်ပေးခဲ့တာကြောင့် ပျော်နေတဲ့ ချယ်ရီသင်း – Suehninsi
ပရိသတ်အားပေးမှုကို အချစ်ဟာလိုက်လို့ ပြေးတာလား ပြေးလို့လိုက်တာလား ဆိုတဲ့သီချင်းလေးနဲ့ အချစ်ဟာလိုက်လို့ ပြေးတာလား ပြေးလို့လိုက်တာလား ဆိုတဲ့သီချင်းလေးနဲ့ အခိုင်အမာရရှိလာခဲ့တဲ့ ချယ်ရီသင်းကတော့ အခုလတ်တလောမှာလည်း ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် သီချင်းကောင်းတွေ ဆက်တိုက်ချပြနေသူပါ။ လူသိများလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ပွဲတွေလည်းဆက်တိုက်ဖျော်ဖြေနေရတဲ့ ချယ်ချယ်ကတော့ ဒီနေ့မှာ ကားတစ်စီးဝယ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်ကို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံအပြည့်နဲ့ ဝယ်နိုင်ခဲ့တာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို ” ချယ်ချယ်ကားဝယ်လိုက်ပါပြီ…. အကြွား post မဟုတ်ပါ စာဖတ်ပေးစေလိုပါသည်…. ဒီလိုပါချယ်ပွဲတွေဆိုပြီး
ရတဲ့အနုပညာကြေးအချို့ကို ချယ်သီချင်းတွေလုပ်ပြီး တချို့လှူ ပြီး တချိူ့ကိုစုထားလိုက်တယ်….. အဲ့ဒါနဲ့စုထားတဲ့ငွေကလည်းသိန်း(၁၀၀)တည်း ကားဝယ်ဖို့လည်းမမှီ ဘာမှလည်းလုပ်မရနဲ့မို့…. ယောင်းမနဲ့အကိုကြီးကို ကိုကြီးတို့လိုရင်ယူသုံးဆိုပြီးပေးသုံးခဲ့လိုက်တာ….. ကိုကြီးက ကားလိုနေတဲ့ကိုယ့်ကိုသိပြီး…. ကိုယ်စုထားတဲ့သိန်း(၁၀၀)နဲ့ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံတွေအကုန်….. သူတို့စိုက်ပြီးဝယ်ပေးခဲ့တယ်…. ချယ်တို့မိသားစုကအရမ်းကြီးရှိလှတယ် မဟုတ်ပေမယ့် ရှိတာနဲ့မိသားစုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မျှဝေသုံးစွဲလေ့ရှိပါတယ်…. ဖေဖေကမဆုံးခင်တည်းက
အဖေက သားသမီးတွေကိုစည်းလုံးတာပဲ မြင်ချင်တာ စံပြမိသားစုအဖြစ်မြင်ချင်တာလို့ခဏ ခဏပြောဖူးတယ် မိသားစုတစုမှာ စည်းလုံးမှု အပြန်အလှန် အကြီးအငယ် Respect ထား ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကို…. ချယ်တို့ငယ်ငယ်တည်းကခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခဲ့တော့…. အခုအချိန်ထိပြန်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပြန်ပြောတာ အော်တာ ဆဲတာမရှိခဲ့ဘူး… အခုလည်း အကိုကြီးက အိမ်ထောင်ကျသွားပေမယ့် အကြီးပီသစွာအကိုကြီး
အဖရာ သူ့ညီမကိုကားဝယ်ပေးသတဲ့… မောင်နှမချင်းချစ်ကြပါ လေးစားကြပါ…. ရှိတုန်း တန်ဖိုးထားချစ်ပေးကြပါမိသားစုဆိုတာ…. စကားလုံးသုံးလုံးတည်းပေမဲ့ ချယ့်အတွက် ဘဝပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်ခုပါပဲ…. အခုလိုစိတ်တွေရိုက်သွင်းပေးခဲ့တဲ့ ဖေဖေနဲ့မေမေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖေဖေသာရှိရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ မိသားစုကို တန်ဖိုးထားချစ်ခင်ပေးကြပါနော် ” ဆိုပြီး ကားသစ်လေးကို အစ်ကိုကြီးကြောင့် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်း မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကွဲဖြစ်ပေမယ့် မိဘတွေရဲ့ဆုံးမစကားကို နားထောင်ပြီး ချယ်ချယ်လိုချင်နေတဲ့အရာလေးကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့ ချယ်ချယ့် အစ်ကိုရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ လေးစားစရာပဲ မဟုတ်လား ပရိသတ်ကြီးရေ…
ပရိသတျအားပေးမှုကို အခဈြဟာလိုကျလို့ ပွေးတာလား ပွေးလို့လိုကျတာလား ဆိုတဲ့သီခငျြးလေးနဲ့ အခဈြဟာလိုကျလို့ ပွေးတာလား ပွေးလို့လိုကျတာလား ဆိုတဲ့သီခငျြးလေးနဲ့ အခိုငျအမာရရှိလာခဲ့တဲ့ ခယျြရီသငျးကတော့ အခုလတျတလောမှာလညျး ပရိသတျတှအေကွိုကျတှစေ့မေယျ့ သီခငျြးကောငျးတှေ ဆကျတိုကျခပြွနသေူပါ။ လူသိမြားလာပွီးနောကျပိုငျးမှာ ပှဲတှလေညျးဆကျတိုကျဖြျောဖွနေရေတဲ့ ခယျြခယျြကတော့ ဒီနမှေ့ာ ကားတဈစီးဝယျနိုငျခဲ့ပွီဖွဈကွောငျး ပရိသတျကို အသိပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ကိုယျပိုငျပိုကျဆံအပွညျ့နဲ့ ဝယျနိုငျခဲ့တာ မဟုတျတဲ့အကွောငျးကို ” ခယျြခယျြကားဝယျလိုကျပါပွီ…. အကွှား post မဟုတျပါ စာဖတျပေးစလေိုပါသညျ…. ဒီလိုပါခယျြပှဲတှဆေိုပွီး
ရတဲ့အနုပညာကွေးအခြို့ကို ခယျြသီခငျြးတှလေုပျပွီး တခြို့လှူ ပွီး တခြိူ့ကိုစုထားလိုကျတယျ….. အဲ့ဒါနဲ့စုထားတဲ့ငှကေလညျးသိနျး(၁၀၀)တညျး ကားဝယျဖို့လညျးမမှီ ဘာမှလညျးလုပျမရနဲ့မို့…. ယောငျးမနဲ့အကိုကွီးကို ကိုကွီးတို့လိုရငျယူသုံးဆိုပွီးပေးသုံးခဲ့လိုကျတာ….. ကိုကွီးက ကားလိုနတေဲ့ကိုယျ့ကိုသိပွီး…. ကိုယျစုထားတဲ့သိနျး(၁၀၀)နဲ့ကနျြတဲ့ပိုကျဆံတှအေကုနျ….. သူတို့စိုကျပွီးဝယျပေးခဲ့တယျ…. ခယျြတို့မိသားစုကအရမျးကွီးရှိလှတယျ မဟုတျပမေယျ့ ရှိတာနဲ့မိသားစုပြျောပြျောရှငျရှငျမြှဝသေုံးစှဲလရှေိ့ပါတယျ…. ဖဖေကေမဆုံးခငျတညျးက
အဖကေ သားသမီးတှကေိုစညျးလုံးတာပဲ မွငျခငျြတာ စံပွမိသားစုအဖွဈမွငျခငျြတာလို့ခဏ ခဏပွောဖူးတယျ မိသားစုတစုမှာ စညျးလုံးမှု အပွနျအလှနျ အကွီးအငယျ Respect ထား ရမယျဆိုတဲ့စကားကို…. ခယျြတို့ငယျငယျတညျးကခေါငျးထဲရိုကျသှငျးခဲ့တော့…. အခုအခြိနျထိပွနျပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျပွနျပွောတာ အျောတာ ဆဲတာမရှိခဲ့ဘူး… အခုလညျး အကိုကွီးက အိမျထောငျကသြှားပမေယျ့ အကွီးပီသစှာအကိုကွီး
အဖရာ သူ့ညီမကိုကားဝယျပေးသတဲ့… မောငျနှမခငျြးခဈြကွပါ လေးစားကွပါ…. ရှိတုနျး တနျဖိုးထားခဈြပေးကွပါမိသားစုဆိုတာ…. စကားလုံးသုံးလုံးတညျးပမေဲ့ ခယျြ့အတှကျ ဘဝပွီးတော့ ကမ်ဘာတဈခုပါပဲ…. အခုလိုစိတျတှရေိုကျသှငျးပေးခဲ့တဲ့ ဖဖေနေဲ့မမေကေိုကြေးဇူးတငျပါတယျ ဖဖေသောရှိရငျ ဘယျလောကျကောငျးလိုကျမလဲ မိသားစုကို တနျဖိုးထားခဈြခငျပေးကွပါနျော ” ဆိုပွီး ကားသဈလေးကို အဈကိုကွီးကွောငျ့ ပိုငျဆိုငျခဲ့ရကွောငျး မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ အိမျထောငျကှဲဖွဈပမေယျ့ မိဘတှရေဲ့ဆုံးမစကားကို နားထောငျပွီး ခယျြခယျြလိုခငျြနတေဲ့အရာလေးကို ဖွညျ့ဆညျးပေးခဲ့တဲ့ ခယျြခယျြ့ အဈကိုရဲ့စိတျဓာတျကတော့ လေးစားစရာပဲ မဟုတျလား ပရိသတျကွီးရေ…
Source : Cherry Thin | Reference & Credit : Cele Gabar